Kọmputa egwu | December 2019
Ntuziaka ntinye Windows 7 na bọtịnụ USB
Otu sistemụ arụmọrụ bụ usoro na-enweghị nke ngwaọrụ ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma. Maka smartphones nke Apple, nke a bụ iOS, maka kọmputa site na ụlọ ọrụ ahụ, MacOS, na maka ndị ọzọ, Linux na Windows na OS dị ala. Anyị ga-enyocha otu esi arụnye Windows 7 na kọmputa site na windo mbanye.
Na-ebugharị egwuregwu ahụ na USB flash drive site na kọmputa
Ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịnwe idetuo egwuregwu ahụ na komputa ahụ na kọmputa USB, dịka ọmụmaatụ, n'ihi na emesị nyefee ya na PC ọzọ. Ka anyị chọpụta otu esi eme nke a n'ụzọ dị iche iche. Usoro mwepụ Tupu ị nyochaa usoro nnyefe ahụ kpọmkwem, ka anyị chọpụta otu esi akwadebe ngwa windo mbụ.
Ụzọ niile iji jikọọ ọkụ mbanye na TV
Ọtụtụ n'ime anyị ga-eji obi ụtọ kwenyere ikiri ihe nkiri ịchọrọ, vidio, ma ọ bụ naanị foto ndị na-echekwa na windo. Ma ọ bụrụ na ihe a nile dị mma na TV buru ibu, otú ahụ ka ọ dị. Ma na ụfọdụ, ndị ọrụ amaghị naanị ihe ọ ga - eji jikọọ ihe nchekwa nchekwa na TV.
Ịmepụta windo ngwa ngwa na Paragon Hard Disk Manager
Mkpa ịmepụta ngwa USB flash nwere ike ime mgbe ọtụtụ malfunctions sistemụ arụmọrụ, mgbe ịkwesịrị iweghachi kọmputa ma ọ bụ naanị nwalee ya site na iji ụlọ ọrụ dị iche iche na-enweghị mmalite os. Enwere mmemme pụrụ iche maka ịmepụta USB ndị ahụ. Ka anyị chọpụta otu esi arụ ọrụ a site na enyemaka nke Paragon Hard Disk Manager.
Ntuziaka maka imelite BIOS site na windo mbanye
Ihe ndị mere maka ịmegharị nsụgharị BIOS nwere ike ịdị iche: dochie processor na motherboard, nsogbu na ịwụnye ngwaike ọhụrụ, wepụ ihe ezughị ezu na ụdị ọhụrụ ahụ. Tụlee otu ị ga - esi jiri onwe gị mee ụdị mmelite ndị ahụ site na iji windo mbanye. Otu esi emelite BIOS site na mkpo ọkụ mbanye Ị nwere ike ime usoro a na ntinye dị mfe.
Anyị na-agbanye egwuregwu site na kọmputa ọsọ ọsọ na kọmputa
Kọmputa nke oge a bụ ngwaọrụ maka ịrụ ọrụ dị iche iche, ma na-arụ ma na-atọ ụtọ. Otu n'ime ụdị ntụrụndụ kachasị ewu ewu bụ egwuregwu vidio. Egwuregwu egwu na oge anyị na-etinye nnukwu mpịakọta - ma na akwụkwọ ahụ a chọrọ, ma na-etinye ya n'ime insaller.
Na-eduzi ikpe mgbe kọmputa ahụghị flash mbanye
N'otu oge dị mma, mgbe onye ọrụ tinye data nchekwa ya n'ime ọdụ ụgbọ USB, kọmputa ahụ agaghị anabata ya ma ọlị. Ruo ugbu a, ihe niile dị mma: usoro ahụ ji nwayọọ kpebie ihe nchekwa ahụ ma nwee ike ịrụ ọrụ na ya. Ma ugbu a, ihe niile dị iche na kọmpụta na-ajụ ọbụna igosi na ha tinyela ya na windo mbanye.
Otu esi edozi usoro RAW na ngwa mkporo
Mgbe ụfọdụ, mgbe ị jikọtara kọmputa na kọmputa, ị nwere ike ịchọta ozi gbasara mkpa ọ dị na ya, nke a bụ eziokwu n'eziokwu na ọ na-arụ ọrụ n'enweghị ọdịda. The mbanye nwere ike mepee ma gosipụta faịlụ, ma site na oddities (ihe odighi na-edeghị aha na aha, akwụkwọ dị iche iche dị iche iche, na ihe ndị ọzọ.
Ịwụnye asambodo na CryptoPro na draịva flash
E jiriwo oge eji eme ihe eji eme ihe eji eme ihe di iche iche (EDS) ejiriwo ya mee ihe n'oru ulo oru obodo na ulo oru ndi ozo. A na-eji teknụzụ eme ihe site na asambodo nche, ma otu nzukọ na nkeonwe. A na-echekarị ihe ndị a na ngwa windo, nke na-etinye ụfọdụ mgbochi. Taa, anyị ga-agwa gị otu esi esi wụnye ụdị asambodo ndị ahụ site na windo mbanye na kọmputa.
Kama nchekwa na faịlụ na flash drive, ụzọ mkpirisi pụtara: nchọpụta nsogbu
Ị mepeela mbanye USB gị, mana naanị mkpirisi si faịlụ na nchekwa? Isi ihe abụghị ịtụ ụjọ, n'ihi na, ọ ga-abụrịrị na ozi niile dị mma na ụda. Ọ bụ naanị na nje nwere na ụgbọala gị na ị nwere ike mfe ijikwa onwe gị. Ụzọ mkpirisi pụtara kama faịlụ na windo. Nke a nwere ike igosipụta onwe ya n'ụzọ dị iche iche: folda na faịlụ abụrụla mkpirisi; ụfọdụ n'ime ha tụfuru kpamkpam; n'agbanyeghị mgbanwe ndị a, ọnụ ọgụgụ ncheta free na flash mbanye adịghị abawanye; Enweghi ike igosi nchekwa na faịlụ.
Otu esi echekwa faịlụ ma ọ bụrụ na ikpo ọkụ mbanye adịghị emeghe ma jụọ ka ọkpụkpọ
Iji mgbasa ozi dị mkpokọta iji chekwaa ozi dị mkpa bụhiere ọtụtụ ndị. Na mgbakwunye na eziokwu ahụ nwere ike ịfe ngwa ngwa, ọ ga-ada ada na data bara uru ga-efu. Ihe atụ nke nke a bụ ọnọdụ mgbe ọ na-enweghị ike ịgụta ya ma rịọ ka ịmalite ịhazi. Otu esi enweta faịlụ ndị dị mkpa, anyị ga-ekwu okwu ọzọ.
A-Data Data Iweghachite Nduzi Nduzi
A-Data bụ ezigbo ụlọ ọrụ na-eto eto, ma ị nwere ike ịhụ na njikwa nwere isi na-enwu gbaa isi. N'ọdịnihu, ụlọ ọrụ a ga-enwe nnukwu ihe ịga nke ọma! Maka mgbake nke draịvụ draịvụ A-Data, e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ dị mma nke nwere ike inye aka n'okwu a. Esi weghachite ngwa ngwa USB nke A-Data Ndị ọkachamara A-Data wepụtara onwe ha ngwa nchịkọta mgbake na ntanetị, nke pụtara ọtụtụ.
Hazie USB flash mbanye
Ọtụtụ ndị na-egwu egwu detuo faịlụ ọdịyo site na kọmpụta gaa na USB flash drive maka oge na-ege ntị site na redio teepu ndekọ. Ma ọ ga-abụ na mgbe ị jikọtara ụgbọelu ahụ na ngwaọrụ ahụ, ị ​​gaghị anụ egwú na ndị ọkà okwu ma ọ bụ ekweisi. Ikekwe naanị cassette a adịghị akwado ụdị faịlụ ọdịyo nke edere egwu ahụ.
Iji ngwa mkpofu dị ka ebe nchekwa na PC
PC ndị dị ọnụ ala, laptọọpụ na mbadamba na Windows nwere ike ịme ngwa ngwa mgbe ị na-eme iwu ma ọ bụ mepee faịlụ. Karịsịa, nsogbu a na-egosipụta onwe ya mgbe ọ na-emeghe ọtụtụ mmemme ma na-ebupụta egwuregwu. Emekarị nke a bụ n'ihi ntakịrị obere RAM. Taa, ugbua 2 GB nke RAM ezughị ezu maka ọrụ nkịtị na kọmputa, ya mere ndị ọrụ na-eche banyere ịbawanye ya.
Bọgharịa site na USB flash drive na ASUS laptọọpụ
ASUS Laptọọpụ enwetawo mgbasa ozi maka àgwà ya na ntụkwasị obi ya. Ngwaọrụ nke onye na-emepụta, dịka ọtụtụ ndị ọzọ, na-akwado nkwado site na mgbasa ozi ndị dị n'èzí, dị ka ngwa windo. Taa, anyị ga-atụle usoro a n'ụzọ zuru ezu, yana ịmara nsogbu ndị nwere ike ịnweta na ngwọta ha. Na nbudata ASUS laptọọpụ site na windo mbanye N'ikpeazụ, algọridim na-ekwughachi usoro ahụ maka otu niile, ma e nwere nuances ole na ole anyị ga-achọpụta na-esote.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na faịlụ ndị dị na flash mbanye adịghị ahụ anya
Ndị na-ejide ngwa ngwa flash nwere ọnọdụ mgbe ha na-etinye mgbasa ozi ha ọzọ na komputa, ọzọ, ọdịnaya ya adịkwaghị. Ihe niile dị ka ọ dị na mbụ, mana o yiri ka ọ dịghị ihe ọ bụla na ụgbọala, mana ị maara na e nwere ụfọdụ ozi n'ebe ahụ. N'okwu a, atụla egwu, ọ dịghị ihe mere ị ga-eji nweta ozi.
Ndozi nsogbu ahụ na ibelata ụda mgbagwoju ọkụ
Mgbe ufodu, enwere onodu mgbe ugbua kpochapu na mbelata ngwa ngwa. Ihe kachasị kpatara ọnọdụ a nwere ike ịbụ nbudata na-ezighị ezi site na kọmputa, nhazi usoro na-ezighị ezi, nchekwa nchekwa dara ogbenye na ọnụnọ nke nje. N'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-aghọta otu esi edozi nsogbu dị otú ahụ. Igwe mgbagwoju agbaala agbadaala: ihe na ngwọta Dabere na ihe mere, ị nwere ike iji ọtụtụ ngwọta.
Iguzobe "Aha nchekwa na ezighị ezi" mgbe ọ na-ejikọ eriri flash USB
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwa ijikọ kọmpụ ọkụ na kọmputa na-akpata njehie na ederede "Aha aha nchekwa ezighị ezi." Enwere otutu nsogbu nke nsogbu a, ya mere o nwere ike idozi ya n'uzo di iche iche. Ụzọ ị ga-esi wepụ njehie ahụ "A na-edezi aha nchekwa ahụ" Dị ka ekwuru n'elu, njehie nwere ike ịkpata nsogbu na ụgbọala n'onwe ya, ma ọ bụ site na malfunctions na kọmputa ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ.
Kpebie ụyọkọ ụyọkọ mgbe ị na-edegharị ụgbọala USB gaa na NTFS
Mgbe ị na-edegharị eriri USB ma ọ bụ diski ike site na iji usoro Windows arụ ọrụ, usoro ahụ nwere ubi "ụyọkọ ụyọkọ". Usọkarị, onye ọrụ ahụ na-akwụsị ala a, na-ahapụ uru ya bara uru. Ọzọkwa, ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ na ọ dịghị ihe ngosi banyere otú e si edozi ọnọdụ a n'ụzọ ziri ezi.
Ikepị ọkụ mbanye Silicon Ike
N'ụwa anyị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile na-adaba na ngwa Silicon Power flash draịva abụghị ụdị. Icheghị ama dị mfe. N'ọnọdụ ụfọdụ, ụfọdụ faịlụ malitere ịhapụ site na mgbasa ozi gị. Mgbe ụfọdụ, ụgbọala na-akwụsị ịchọta kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla (ọ na - eme na kọmputa ahụ na - ahụ ya, mana ekwentị ma ọ bụ akaebe adịghị achọpụta ya).